20 Mamirioni+ Makiromita makumi maviri emakiromita ekudyara
25 + 25+ indasitiri ruzivo
8000+ 80,000 ㎡ fekitori
2000 + Zviuru makumi maviri zvematani Kubuda Kwegore
Kubva 1995, Drotrong Chinese Herb Biotech Co., Ltd. yanga ichiita basa rekuvaka rese indasitiri cheni yemakwenzi echiChinese, ayo anosanganisira maChinese emakwenzi seedling, kudyara, kutanga kugadzirisa, kudzika kugadzirisa, kuburitsa mishonga nekutengesa.
Nekuvandudzwa kwekambani yedu, isu tasimbisa yekudyara hwaro uye yekugadzira hwaro hweChinese herbs. Kune hwaro hwekudyara, isu tine Epimedium, Cortex Phellodendri, Polygonatum Sibiricum, Saussurea Costus zvichingodaro, iyo inovhara anopfuura mamirioni makumi maviri emamirimita. Kune hwaro hwekugadzira, isu tine maviri ekutanga mafekitori ekugadzirisa uye imwe fekitori yemakwenzi yekubvisa iyo inovhara pamusoro pe60,000 mativi emamita Tinoronga kuvaka fekitori nyowani yekubvisa mishonga uye zvehutano zvigadzirwa fekitori mukati memakore matatu.
Kudyara base & Fekitori
Makiromita makumi maviri emamirimita ekudyara Base & 80,000 ㎡ fekitori
Chinese Herbs zvimwe >>
Herbal wabvisa zvimwe >>
Herbal Tea zvimwe >>
Hutano Zvigadzirwa zvimwe >>
Hutano Kuchengeta Zvigadzirwa
Mazuva ano, vanhu vanoteerera zvakanyanya kuhutano hwavo, nekudaro, zvigadzirwa zvekuwedzera zvehutano zvinofarirwa nevanhu.Drotrong inopa yakanakisa mishonga yemakwenzi uye inoburitsa sezvinhu zvakasarudzika zvezvigadzirwa zvekuchengetedza hutano. Yedu mbishi zvinhu zvakachengeteka, zvakasikwa nemutengo unonzwisisika.
Chipatara uye Chitoro Chemishonga
Chinyakare Chinese mushonga (TCM) inzira yekurapa iyo yakatanga zviuru zvemakore apfuura muChina. Kazhinji zvinonzi "TCM," uye varapi vanoshandisa mishonga yekudzivirira kana kurapa matambudziko ehutano. Drotrong Chinese mahebhu anoshandiswa zvakanyanya muchipatara uye chitoro chemishonga, 100% zvisikwa pasina kusvibiswa, inova sarudzo yakanakisa pamusika wako nemutengo wakatarwa wefekitori.
Kushandiswa kwemushonga wemushonga wekuwedzera kuri kuwedzera kukosha mukugadzirwa kwemhuka nekuda kwekurambidzwa kushandiswa kwemamwe maantibayoti, zvinokuvadza zvakasara zvinokanganisa uye nemutengo unoshanda. Drotrong ine akawanda mahebhu uye dhonza ayo anogona kushandiswa kumakwenzi feed ekuwedzera.
Mazhinji mafekitori emishonga anotora maChinese mahebhu kana mishonga yemakwenzi sezvinhu zvavo zvisvinu. Drotrong ine yekudyara base, fekitori yekugadzirisa fekitori uye yemakwenzi extrat fekitori. Kubva pamiriwo mbishi zvinhu kusvika kumakwenzi emakwenzi, tinogona kukupa OEM sevhisi iyo inogona kusevha nguva yako nemari.
Ikozvino apo musika wekunaka wazadzwa nemakwenzi ekuzora. Vanhu vanosarudza zvipfeko zvemakwenzi nekuti zvakachengeteka, zvakanaka kune ese marudzi eganda uye akasununguka kubva kumhedzisiro-mhedzisiro. Drotrong Chinese mahebhu uye dhonza zvinogona kushandiswa mune yemakwenzi cosmetic indasitiri.
Mahara masampuli ako
Unogona kutarisa hunhu hwedu ivhu
Dzvanya kuti utore sampuli
Herbal granule workshop yakatanga kutongwa pro ...
Yedu yekambani yemakwenzi granule musangano yakatanga kuyedza kugadzirwa, zvinoreva kuti Astragalus, forsythia, bupleurum uye nezvimwe zvechokwadi mishonga yekurapa ichagadziriswa kuita zvidimbu zvemakwenzi uye fomura granules mune yedu yekugadzira mutsara mune ramangwana, uye ichaenda ku ...
Maca inowanikwa kumakomo eAndes eSouth America ane kukwirira kwemamita 3500-4500. Inonyanya kugoverwa muPuno ecological nzvimbo iri pakati pePeru nePuno guta muSoutheast Peru. Icho chirimwa chemhando yeLepidium meyenii muCruciferae. Parizvino, iyo hombe ...
Mukaka rukato mafuta
Mukaka rukato mafuta imhando ye organic inodyiwa mafuta ehutano ayo anogadzirwa nemukaka mungava mbeu yemafuta. Iine kukosha kwakanyanya kwehutano. Chinhu chikuru chemukaka wemukaka mafuta isaturated fatty acid, inova yakakosha mafuta acid, kureva linoleic acid (Zvemukati me45%). Mukaka ...
Kero: NO.88 South Bindu Road, Gaoxin Dunhu, Chengdu, China
Nyorera kuti utore nhau dzichangoburwa uye zviitiko (kusimudzira, zvigadzirwa zvitsva nezvimwewo)
Pinda yako e-mail
Nyora yako meseji pano uye uitumire kwatiri.